I-ANCLA BAJA IGUMBI LOKUPHUMULA AMAFULETHI AMASHA ANEZINDAWO ZOKUBUKA EZINGU-4 - I-Airbnb
I-ANCLA BAJA IGUMBI LOKUPHUMULA AMAFULETHI AMASHA ANEZINDAWO ZOKUBUKA EZINGU-4
I-condo entsha ngokuphelele.
Jabulela ukusondelana nebhishi nokuzola kwayo! Sinendawo yokupaka yamahhala nethala elibheke enye yezindawo ezinhle kakhulu edolobheni. Inekhishi, igumbi lokuphumula, igumbi lokudlela, amakamelo okulala amabili nengadi yophahla ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo futhi kube mnandi.
Ngebanga elinguhhafu kuphela ukusuka emzileni wamabhayisikili oxhuma ku-pier namamitha angu-250 ukusuka olwandle, i-Ancla Baja Living ikunikeza indawo yokuhlala ethokomele ukuze ujabulele ukushona kwelanga okungenakuqhathaniswa kwase-La Paz.
Amafulethi anamakamelo okulala amabili anekhabethe, umbhede omkhulu, i-ayini kanye nezingubo zoku-ayina zebhodi. Igumbi lokugezela elinamasevisi ( i-shampoo, insipho, i-shower gel) umshini wokomisa izinwele. Endaweni evamile ungajabulela ukubuka i-Bay emakamelweni engadi. Sebenzisa indawo yokosa inyama negumbi lokugezela elihlanganyelwayo, kanye negumbi lokuhlanza izingubo. Siphinde sibe nendawo yokupaka enamakhamera okuphepha.
Itholakala kwenye yezindawo ezinhle kakhulu zedolobha, jabulela ukuthula kwale ndawo.
Kutholakala amahora angu-24 nge-SMS